ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကတည်းက ချစ်ခဲ့ရတဲ့ သူနဲ့ ဇာတ်လမ်းအတူတူရိုက်ရတော့မှာမလို့ ကြည်နူးနေတယ်ဆိုတဲ့ ခင်သဇင် – SKP Entertainment
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ အရမ်းကို လှတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလေး ခင်သဇင်ကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးဖို့ မလိုလောက်ပါဘူးနော်။ အရမ်းကို လှပတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရုံသာမက ဖြူစင်တဲ့ စိတ်ထားလေးကြောင့် ပရိတ်သတ် အချစ်ပိုနေရတာပါ။ SKP Entertainment
ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်တတ်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးပါးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကစ်ကစ် နေမကောင်းစဉ်ကလည်း ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပြုစုစောင့်ရှောက် ကူညီပေးခဲ့လို့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့သူပါ။ SKP Entertainment
သူမကတော့ လေယာဉ်မယ် အလုပ်က ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း မင်းသား ခန့်စည်သူရဲ့ အကူအညီကြောင့် အနုပညာလောကထဲ ရောက်ရှိလာခဲ့ပုံကို အခုလိုပဲ ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမရေးသားထားတာကတော့ ” ကိုယ်က အဲတုန်းက လေယာဉ်မယ်ပေါက်စလေး …မင်းသမီး ဆိုတာ အိပ်မက်တောင် မမက်ခဲ့ဖူးဘူး ….ကိုခန့်က အဲတုန်းက ပြောတယ် …နင် မင်းသမီး လုပ်ပါလားတဲ့ ….နင် လုပ်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ SKP Entertainment
ဟင့်အင်း လုပ်ဖူး ကြောက်တယ်လို့ တခွန်းတည်း ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးတယ်..ဒီလိုနဲ့ …လေယာဉ်မယ် အလုပ်ကိုပဲ ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် နဲ့ အသက်ကို ပေးပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တယ် ၃/၄ နှစ်လောက် ပျော်ပျော်ကြီး လေယာဉ်မယ်ပဲ ဆက်လုပ်ခဲ့တယ် ….အနုပညာ လောက ထဲဝင်ဖို့ အကူညီ အချိတ်ဆတ် ရှိနေပေမယ့်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ငါ မင်းသမီး လုပ်မယ်ဟဲ့ လို့ မွေးကတည်းက တခါမှ တွေးမထားခဲ့တာလည်း ပါမယ် SKP Entertainment
ခင်သဇင် နင် မင်းသမီး လုပ်ပါလား ပြောရင်တောင် ရယ်ချင်တာပဲ သိတယ် ငါ့ရုပ်က ဘယ်လို မင်းသမီး ဖြစ်မှာလဲပေါ့ …ဒါနဲ့ ကိုခန့်နဲ့ ခင်မင်ပြီး ၆ နှစ်လောက်ကြာမှ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို အနုပညာ လောက ထဲကို ရောက်လာလိုက်မှန်း မသိဘူး ။ စတာကတော့ ကိုစိုင်း ခေါ်ရိုက်လိုက်တဲ့ oh oh hot တယ် သီချင်း MTV ကို အပျော်တမ်း စရိုက်တာက စတယ် ဆိုရမှာပဲ….ပိုးက စဝင်ပြီး ကိုယ့်မှာ အနုပညာ နာမည်လေးတောင် ပေးချိန်မရလိုက်ပဲ အနုပညာလောကထဲ ဂလယ်အူကြောင်နဲ့ ရောက်လာခဲ့တယ် SKP Entertainment
လေယာဉ်မယ်က လည်း အဲအချိန်မှာ ထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ ကိုခန့် စခေါ်လို့ပဲ ကိုခန့်နဲ့ သစ္စာရှင်းတမ်း ကို မမိုးဟေကို နဲ့ အတူ တွဲပြီး ပထမ ဆုံး video ကားလေးကို စရိုက်ဖြစ်တယ် အဲကတည်းက စလိုက်တာ ပိုးတွေက အရှိန်သတ်မရနိုင်ပဲ ယနေ့ အထိ အနုပညာလောကထဲမှာ တဝဲလည်လည်နဲ့ သံယောဇဉ် အမျှင်တွေ တန်းခဲ့တာ ကနေ့ အထိပါပဲ
ကိုင်း…. ကိုခန့်ရေ ဒီနေ့တော့ ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာ ကိုယ်တွေ မောင်နှမ ပြန်ဆုံကြပြီပေါ့နော် …SKP Entertainment
ကိုယ့် အသက် ၁၈ နှစ်လောက် ကတည်းက ခင်မင်ခဲ့ ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ ကိုခန့် နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးမှာ ပြန်ဆုံရပြီဆိုတော့ ရင်ခုန်ခြင်းထက် ကြည်နူးခြင်းက ပိုလို့ သာပါတယ် …တခါတလေ လောက ကြီးက ကိုယ့်ကို ကျီစယ်တာလား …. သူအပျင်းပြေ ဆော့တာလားတော့ မသိဘူး …. တခါတလေ များတော့ ကိုယ်ဟာ လောကကြီးကို အိပ်တဝက် နိုးတဝက်နဲ့ တောင် အသက်ရှင်နေတာလားလို့ တွေးမိတဲ့ အထိ လောကကြီးကတော့ ကိုယ့် အတွက် အိပ်မက်ဆန်လွန်းတယ် ….. ခုဇာတ်ကားရဲ့ အမည်လေးကလည်း ……”မနေ့ကလိုပဲ သူငယ်ချင်းတဲ့ “ …….. ကိုယ့် အဖြစ်လေးနဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်တယ်နော်….ကိုယ်တွေကတော့ မောင်နှမ ပေါ့နော် ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။SKP Entertainment
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ သရုပ်ဆောင် ခင်သဇင်ရဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပုံလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်စီတိုင်းကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ SKP Entertainment
Previous post ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ရပ်ဆိုင်း
Next post ထောင်ထဲမှာ သင်္ကြန်ကျခဲ့တုန်းက အမှတ်တရတွေကိုပြောလာတဲ့ မိုးအောင်ရင်